Allow Ur u Bixi Maamul u Dhisidda Gobollada dhexe | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home ARRIMAHA SIYAASADDA Allow Ur u Bixi Maamul u Dhisidda Gobollada dhexe
Allow Ur u Bixi Maamul u Dhisidda Gobollada dhexe
Muddo sanad ku dhow waxaa socda dadaallo maamul-goboleed loogu dhisayo gobollada Mudug iyo Galgaduud, welina wax natiijo ah oo la gaaray ma jiro. Dad badan ayaa isweydiinaya waxa ay yihiin caqabadaha hor taagan dhismaha maamulka?
Markii afaraad ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu tagay Galgaduud si maamulka loo dedejiyo dhismihiisa.
Caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagnaa dhismaha maamulka waxaa ka mid ahaa caasimadda maamulka halka ay noqoneyso iyo madasha shirka halka lagu qabanayo. Reer Cadaado iyo reer Dhuusamareeb ayaa tartan aan caafimaad qabin u galay labadaas arrimood weyna ku guul-dareysteen in ay isku afgartaan, taasina waxay keentay in uu Madaxweynuhu farageliyo oo noqnoqod kaddib uu xal u arkay in uu ku dhawaaqo Dhuusamareeb in ay noqoto caasimadda maamulka halka Cadaadana uu ku dhawaaqay in ay noqoto madasha shirka.
Hase yeeshee warka Madaxweynaha ma qancin reer Cadaado oo waxay u arkeen faragelin aan munaasib ahayn oo uu Madaxweyne Xasan Sheekh ku sameeyay arrimaha gobollada dhexe , taasina waxay keentay in shirkii uu madaxweynuhu furi lahaa uu dib u dhaco, isla markaana ay dhowr beel ergooyinkoodii ka soo baxaan Cadaado.
Ilo xog-ogaal ah oo Cadaado ku sugan ayaa sheegay in uu madaxweynaha si rasmi ah u furay shirka hase yeeshee aan furitaankiisa loo dhammeyn oo beelo badan oo muhiim ah ay ka maqnaayeen, sidaas darteedna ay tahay in dhaqso lagu xalliyo khilaafka taagan si maamulka loo dedejiyo.
Warar sugan ayaa sheegaya in aan la hubin xilli dhow lagu dhisi karo maamulka Gobollada dhexe, waxayna ilo-wareedku ku sababeeyeen taas dhowr arrimood oo kala ah; faragelin xooggan oo gobollada kale ay ku hayaan gobolkaan, iyagoo ka cabsanaya in uu saameyn xun ku yeesho maamulkooda, dowladaha gobolka oo si cad iyaguna faragelin qaawan ugu haya Mudug iyo Galgaduud, waxaa intaas sii dheer beesha caalamka oo iyaduna si cad u daneyneysa cidda ku soo bixi doonta madaxtinnimada gobolkaan xasaasiga ah.
Si kastaba ha ahaatee waxaa xusid mudan in ciddii ku guuleysata madaxtinnimada gobolkaan in ay saameyn weyn ku yeelan doonto dhammaan maamullada hadda dhisan iyo kuwa kale ee dhismi doona iyo weliba doorashada madaxweynaha ee sanadka 2016. Sirta ka dambeysa ku noqnoqoshada gobolkaan ee madaxweynahana waa middaas, sida aan ka soo xigannay dad khubarro ku ah arrimaha siyaasadda Soomaaliya.
Xagga murashaxiinta doorashada Mudug iyo Galgaduud marka la eego, waxaa ugu cad cad ragga tartamaya shan murashax oo kala ah; Cabdikariim Xuseen Guuleed, oo la sheegayo in ay madaxweynaha isku dhaw yihiin, Axmed Macallin Fiqi oo xilligii madaxtinnimada Sheekh Shariif ahaa madaxa Nabad-sugidda, Axmed Cabdisalaam oo ah Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Addis Ababa, Itoobiya, Maxamed Cilmi oo muddo dheer hay’adda ICRC u joogay Galgaduud iyo Cabdi Xasan Cawaale (Qaybdiid) oo ah Madaxweynihii hore ee Maamulkii Galmudug. Axmed Cabdisalaam marka laga reebo afarta kale waxay guryo ka kireysteen magaalada Cadaado oo haatan aad u buux dhaaftay.
Warar aan la xaqiijin, hase ahaatee ilo xog-ogaal ah laga helay ayaa sheegaya in laga yaabo in Axmed Cabdisalaam uu murashaxnimada ka tanaasulo, isagoo ku beddelanaya Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka ama jago kale sida danjirennimo.
Lama saadaalin karo cidda ku soo baxeysa doorashada, laakiin waxaa la xusayaa Cabdikariim Guuleed in aanu sahlaneyn sababtuna ay tahay, isagoo ay isku dhow yihiin ragga talada dalka haya, halka Axmed Cabdisalaam uu isaguna gacansaar dhow la leeyahay Itoobiya.
Waxaa la qiyaasayaa in uu muran badan ka dhalan doono doorashada Gobollada dhexe, sababaha aan kor ku soo xusnay dartood.
Previous articleSomalia: How Would Be Life without EVC PLUS?
Next articleFAALLO: Yaa U Maqan Dhaawacyada Culus ee Yaalla Isbitaallada Muqdisho?